HomeTurkeyCentral Anatolia Region78 KarabukCHP Cakir: 'Ekwesịrị iguzobe nolọ Ọrụ Teknụzụ ilgbọ njem na Karabuk'
08 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 78 Karabuk, Central Anatolia Region, ụgbọ okporo ígwè, General, Isi akụkọ, Turkey 0
Chpli cakir okporo ụzọ teknụzụ ụgbọ njem
Onye isi oche mpaghara CHP Karabük Abdullah Cakir, ekwesịrị iguzobe Institute of Rail Technologies na Karabuk, ka o kwuru.
Onye isi oche mpaghara Cakir, Institutelọ Ọrụ Teknụzụ ilgbọ njem ụgbọelu kwuru na a hụkwara obodo ahụ.
Karabük, Turkey bụ ígwè ígwè na ígwè choro ùgwù na nọrọla ọtụtụ afọ na ụwa ígwè mmepụta ke Turkey 8. Çakır kwuru na o gosipụtala ikike akụ na ụba ya na nka na mba ahụ wee sị, “Taa, ọ bụrụla ihe dị mkpa ka a gbanwee gaa na ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ nkà na ụzụ iji nọgide na-asọmpi akụ na ụba Karabük na iji nweta ọnọdụ ya na ahịa mba na nke ụwa. Agbanyeghi na ikike a haziri ahazi sitere na TSO, ndi n’ile ndi otu AK Party kpuo ìsì, ma ha nwere nti.
Ọ bụ ezie na anyị, dị ka CHP na ndị ọchụnta ego niile nọ na Karabük, KBU, KARDEMİR na-agbaso afọ na ọnọdụ asọmpi nke akụrụngwa ụlọ ọrụ, Iron and steel Institute, Rail Systems Engineering, Technopark, n'agbanyeghị na nkwado nke imekọ ihe ọnụ na mahadum na ohere ọ bụla. Ulo nke Transportgbọ njem teknụzụ 'na-ahụ nke ukwu. Ọ dị mkpa icheta na KARDEMİR AŞ. na Mahadum Karabük, ụlọ ọrụ abụọ abụọ tozuru oke na ngalaba nke teknụzụ ụgbọ okporo ígwè, ekpughere mmụta sayensị na ngwaahịa ndị ọzọ ruo taa. All Turkey maara na a na nnukwu akụkụ nke mba ụgbọ okporo ígwè technology mkpa KARDEMİR na mpaghara mba ego na-nyere si dị ka ..
A makwaara na ọ ka mma ịtọlite ​​Institute of Rail Transport Teknụzụ na Karabük kama Gebze. Ọ ga-amasị m ịkpọ oku na ndị isi ọchịchị niile, ọkachasị ndị na-achị achị, iji guzobe njikọ aka na thelọ Ọrụ ationgbọ njem Ọwara, nke ga-akpụzi ọdịnihu Karabük. Ka anyị gbalịsie ike iweta ụlọ ọrụ a, nke bụ maka abamuru nke Karabük, n'obodo anyị. Anyị na-arịọ ndị ọrụ dị mkpa ka ha tụgharịa mkpebi Karabük ma rịọ ya ka ọ tụgharịa uche na mkpebi ya. A ga-ehiwe Institutelọ Ọrụ nke Transportgbọ njem ụgbọ ala na Karabük. ”
Onye isi oche TSO Mescier: 'Rail Transportation Technologies Institute Karabük Rights' 03 / 10 / 2019 Karabük Chamber of Commerce and Industry Onye isi ala Mehmet Mescier biputere akwụkwọ akụkọ banyere nguzobe nke illọ Ọrụ Techgbọ njem ụgbọ njem na Karabük. Onye isi ala Mescier kwupụtara nke a na nkwupụta ya; 'Anyị na-anọgidesi ike na ntachi obi kemgbe 1937 iji tinye ndị ọhụrụ na ntinye aka na ụlọ ọrụ mpako anyị na-ebugharị ma wuo Karabük siri ike. Dị ka a N'ihi nke a mbo Karabük, Turkey bụ ígwè ígwè na ígwè e okpono izute mkpa maka ọtụtụ afọ. World ígwè mmepụta ke Turkey 8. Ọ bụ ihe kwesịrị ịrịba ama na ọ na-egosi etu Karabük dịruru mkpa n’akụkụ a kemgbe 1937. Ma ...
Rail Transportation Technologies Institute a ga-ehiwe na Gebze 21 / 09 / 2019 Ụlọ ọrụ na Technology Minister Mustafa Varank, Transport na Infrastructure Minister Cahit Turhan nakwa na Turkey Scientific na nkà na ụzụ Research Council of Turkey rụrụ na òkè nke Turkey (TUBITAK) na Republic of Turkey State Railways (TCDD) na "The Railway Institute of Transport Technology" imekọ ihe ọnụ protocol bịanyere aka n'akwụkwọ nkwado ememe na nguzobe n'okwu ya, gosipụtara afọ ojuju na mbinye aka nke usoro ahụ. HERE ANY T na-agakwuru ngalaba na-ahụ maka ngwa agha na ngalaba RAIL olarak dị ka Minista, 11. Varank gosipụtara mkpa ụzọ ụgbọ okporo ígwè dị na atụmatụ mmepụta ihe na teknụzụ nke 2023 kwadebere n'etiti usoro mmepe.
DATEM ga-abụ R & D Institute nke mpaghara 26 / 07 / 2017 Malite na 2003, a na-arụ ọrụ ugbo na ọganihu siri ike na-aga n'ihu n'oge okporo ụzọ. N'ime usoro a, ọ dị mkpa ịmepụta ụlọ ọrụ nyocha na ebe mmepe iji zụlite mpaghara ahụ, nyefee ihe ndị ọhụrụ na mpaghara ahụ ma hụ mkpa R & D. Iji mepụta usoro dị otú ahụ, nke na-eme ka ndị niile na-arụ ọrụ ụgbọ okporo ígwè jikọta ọnụ ma na-ebute ihe ndị R & D chọrọ n'ọdịnihu, ndị nduzi TCDD; Ụbọchị 26.10.2009 na mkpebi 19 / 142, ụlọ ọrụ Railway Research Technology Center (DATEM) malitere. Onye ọrụ ego Güven Kandemir, DATEMIN; iji nyochaa mmepe na nyocha na ụwa n'ọhịa okporo ụzọ, iji chọpụta mkpa na nsogbu, iji nweta ngwọta ọhụrụ
Smart City Teknụzụ Na-egosi na ICSG Fair 27 / 04 / 2019 Siemens na-enye 7 ngwaahịa na ngwọta maka obodo ndị mara mma n'ọdịnihu na ọ na-enye n'ime Digital Networks. International Istanbul Smart Grids na Cities Congress na Fair. Istanbul Smart Grids na Cities Congress na Fair (ICSG) 25-26 mere na Haliç Congress Center ke April, ebe nsogbu ndị na-eme ka ụwa ike mpaghara ọnụ na Istanbul na nke na-eme ka atụmatụ netwọk n'ọdịnihu na obodo na-atụle. Siemens Turkey, ICSG Fair n'okpuru Digital Networks awade ngwọta maka smart obodo, na n'ihi na ike ụwa nke ga-eme n'ọdịnihu "adigide, smart na mma" wee ebe na themed ngwaahịa. ụlọ ọrụ ndú na ọgụgụ isi digital network awa site Siemens Turkey ...
E kwesịrị itinye cableway na Akdag Summit 17 / 05 / 2016 A ghaghị ịhazi usoro nhazi nke Akdağ: Nationalist Movement Party (MHP) Denizli Metropolitan Municipality Council Deputy Chairperson Av. Joseph Garip, Çivril Akdag nzuko chọrọ ịmepụta ụgbọ ala. Mayor nke Denizli obodo ukwu metutere na May na Çivril. MHP Denizli Metropolitan Municipality Council Group Deputy Onye isi oche nke nzukọ. Joseph Garip, Çivril Akdag nyere iwu ka e guzobe ụgbọ elu na-aga n'ugwu ahụ. AHỤTA CIVRİL-DİNAR AKWỤKWỌ N'ỤLỌ AHỤ Garip, na okwu ya kendi Çivril district bụ mpaghara ebe a na-arụ ọrụ ubi ugbo na anụ ụlọ anụ ụlọ ya. Na ugbo, obughi na apụl, cherị, piich, sunflower osisi, ube walnuts Tarım
Onye isi oche TSO Mescier: 'Rail Transportation Technologies Institute Karabük Rights'
E kwesịrị itinye cableway na Akdag Summit
TRABZON kwesịrị ịtọ Ọdụlọtọ Ọrụ
Ọdụ ụgbọ mmiri Bolu adịghị arụ ọrụ n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè
Kwesịrị ịtọ na Karsa Free Zone
A ghaghị ịkwado mpaghara ebe a na-arụ ọrụ na mpaghara ndị Russia na mpaghara ụfọdụ nke Russia
Samsun-Batumi High Speed ​​Line ga-arụnyere